Ithegi: UNTUCKit | Martech Zone
"Ubugcisa beMfazwe" Amacebo oMkhosi yindlela elandelayo yokuBamba iMarike
NgoLwesibini, Matshi 13, 2018 NgoMvulo, Matshi 12, 2018 UShawn Schwegman
Ukhuphiswano lwabathengisi lukhohlakele kwezi ntsuku. Ngabadlali abakhulu abanjengoAmazon abalawula i-e-commerce, iinkampani ezininzi ziyasokola ukuqinisa indawo yazo kwintengiso. Abathengisi abaziintloko kwiinkampani eziphezulu ze-e-commerce zehlabathi abahlali ecaleni nje ngethemba lokuba iimveliso zabo ziya kufumana ukubambeka. Basebenzisa ubugcisa bemfazwe kunye namaqhinga okunyanzela iimveliso zabo phambi kotshaba. Makhe sixoxe ngokuba lisetyenziswa njani eli qhinga ekubanjweni kweemarike… Ngelixa iimveliso eziphambili zihlala zikhona